मेरो श्रीमान फिर्ता लान्छु, सन्तोष दाइ हजुरले पनि श्रीमती फिर्ता लानुस’ (भिडियो सहित)
एक महिना भन्दा बढी समय सम्पर्क विहिन भएकी सन्तोष सुनारले आफ्नो श्रीमतीलाई अरु कुनै पुरुषसंग एउटै कोठामा फेला पारे । श्रीमतीलाई खोज्दै उनी प्रहरी सहित सुनौल पुगेका थिए । प्रहरी र केही सञ्चारकर्मी सहित सुनौल पुगेका सन्तोषले श्रीमती प्रमिलालाई एउटा घरको छतमा सुतेको अवस्थामा फेला पारे । उनी एक पुरुषसंग एक महिना देखि एउटा कोठामा बस्दै आएका थिए । ति पुरुष पनि विवाहित र दुई छोरा छोरीको बुवा भएको खुलेको छ । केही समय देखि साउदीवाट आएका उनी पनि आफ्नो परिवार र श्रीमतीलाई थाहा नदिई प्रमिलासंग बस्दै आएका थिए ।
तर जव उनले श्रीमतीलाई भेटे उनी श्रीमानसंग केही बोलिनन् प्रहरीको गाडीमा बसिन् र प्रहरी कार्यालय पुगीन् ।एक महिना भन्दा धेरै समय देखि सम्पर्क विहिन भएकी श्रीमती अर्को पुरुषका साथ भेटिदा सन्तोष भने झण्डै वेहोस् भए । तर प्रमिलामा भने कुनै प्रभाव परेको देखिएन । श्रीमतीलाई भेटेपछि सन्तोषले प्रतिकृया दिँदै भने यसरी प्रहरीले समातेर ल्याउँदा पनि मेरै अगाडी अर्को पुरुषसंग भेटिँदा गल्ती गरेजस्तो कुनै फिलिगं छैन ।
उनी ३५ दिनदेखि परिवारवाट सम्पर्क विहिन भएकी प्रमिला आफ्ना बारेमा आइरहेका भिडियोका बारेमा पनि जानकार थिइन् । प्रहरी चौकीमा गएका सञ्चारकर्मीहरुसगं पनि उनी रिसाइन् । उनले म कोसंग भागें ? जे पायो त्यही लेख्ने ? भन्दै युट्युवरसंग रिसाएको पनि सन्तोषले बताए । वैदेशिक रोजगारीमा साउदीमा काम गर्दै आएका पति सन्तोष सुनारको कमाएको पैसा र अन्य कागज सहित दुई बच्चालाई छोडेर प्रमिला गत मंगसिर २४ बाट हराएकी थिइन् । दुई छोराछोरीकी आमा समेत रहेकी प्रमिला विवाहित पुरुषसंग त्यसरी जानुको कारणवारे अहिले सम्म खुलेको छैन । प्रहरीले घटनाको अनुसन्धान भइरहेको जनाएको छ ।
आफुले सम्भावित स्थानमा खोजि गर्दा पनि फेला नपरेपछि उनले मिडिया गुहारेका थिए । एक महिना देखि खोजिमा रहेकी उनकी श्रीमती प्रमिला सुनार सुनौलीमा भेटिएकी हुन् । उनी बाँके नेपालगन्जमा एक पुरुषसंग कोठामा बस्दै आएको अवस्थामा प्रहरीले फेला पारेको हो । नेपालगन्जका ति पुरुष पनि विवाहित हुन् । उनी पनि विदेशवाट फर्किए लगत्तै प्रमिलालाई लिएर हिँडेको खुलेको छ । “>(भिडियो सहित)